११ राम्रो डिजाइन सिद्धान्तहरू प्रत्येक व्यवसायले थाहा पाउनुपर्दछ - Print Peppermint
नोभेम्बर 28, 2019 | उद्यमी, ग्राफिक डिजाइन, सुरूवात
तपाईं डिजाइनको साथ अनुभवी हुनुहुन्छ वा भर्खरै सुरू गर्दै, राम्रो डिजाइनका केही आधारभूतहरू छन्। यहाँ ११ डिजाइन सिद्धान्तहरू छन् जुन सबैले थाहा पाउनुपर्दछ।
राम्रो डिजाईनको विकल्प छैन। यदि तपाईंको वेबसाइटले न्यूनतम मूल्यमा सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ, मानिसहरूले तपाईंको सामग्रीको साथ संलग्न हुने छैनन् यदि यो उनीहरूलाई उचित तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छैन भने।
यो आवश्यक छ। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग डिजाइनमा पृष्ठभूमि छैन भने, तपाईंलाई अझै पनी यसको बारेमा केहि जान्नु आवश्यक छ जब यो तपाईंको व्यवसायको कुरा आउँछ। चाहे तपाईं आफैं वेब डिजाइन गरिरहनु भएको छ वा डिजाईनर राख्नु भएको छ, केहि समयमा तपाईंले आफ्नो साइटमा के समाप्त हुन्छ भन्ने बारे अन्तिम निर्णय लिनु पर्छ।
तलका सिद्धान्तहरू हेर्नुहोस् तपाईलाई राम्रो डिजाइन जस्तो देखिन्छ।
१. कार्यक्षमता कुञ्जी हो
अघि हामी सिर्जना गर्न सक्छौं एक नवीन र आकर्षक उत्पादन, हामीले कुन चीजहरू काम गर्छन र कुनले गर्दैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।
हामीले सबै वेबसाइटहरू भ्रमण गरेका छौं जुन काममा धेरै तत्वहरू छन्। हामी सम्पर्क पृष्ठमा क्लिक गर्न कोशिस गर्दैछौं तर हामी यो गर्न सक्दैनौं किनकि लोड गर्न वा स्क्रोल गर्नको लागि पृष्ठ थप सुविधाहरूको साथ तल बग्ड भएको छ। जब हामी पृष्ठ लोड हुनको लागि कुर्दै छौं, हामीलाई सोधिन्छ यदि हामी "साँप" खेल्न चाहन्छौं भने जब पृष्ठ हेर्नको लागि तयार हुन्छ।
यो सामान सबै अनावश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस्, यो राम्रो छ जब हामीसँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन हाम्रो पक्षमा काम गर्दछन् तर व्यापार वेबसाइटको उद्देश्य भनेको सूचना र सेवाहरूको पहुँचलाई अनुमति दिनु हो।
यदि अरू केही छैन भने, निश्चित गर्नुहोस् कि साइट प्रयोग गर्न सजिलो छ। स्पष्ट साइट वास्तुकला छ जुन अर्डरलाई पछ्याउँछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले के खोजिरहेका छन् फेला पार्न अनुमति दिन्छ। एक सुन्दर डिजाईन मात्र तपाईको फाइदाको लागि काम गर्दछ यदि साइटको बिल्डिंग ब्लकहरू ठाउँमा छन्।
२ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं अनुकूल हुनुहुन्छ
यहाँ स्थिरताको दुई अर्थ छ। पहिले, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट अनलाईन वेबसाइटहरूको सामान्य रूपसँग अनुरूप छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं शाखा हाल्न सक्नुहुन्न, यसको मतलब यो हो कि तपाईंसँग एउटा साइट हुनु आवश्यक पर्दछ जुन व्यक्तिहरू बुझ्न र सहजपूर्वक प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।
विदेशी तरीकाले व्यवस्थित गरिएको साइट प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको विदेशी भाषा पढ्ने प्रयास गर्नु जस्तै हो - अ English्ग्रेजी र स्पेनिश बीच केही समानताहरू हुन सक्दछन्, तर तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको भाषामा पढ्न यो सजिलो छ। लाई
प्रयास गर्नुहोस् र सामान्य टेम्पलेट राख्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरू हेर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाई उनीहरूको अनुभव सहज भएको चाहानुहुन्छ।
दोस्रो, तपाइँ तपाइँको साइट को पृष्ठ को लागी पनी एकरुपगत चाहानुहुन्छ एक अर्को संग। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन वेबसाइटमा भिन्न हुन सक्दछ, र तपाइँ ती चीजहरू एकसाथ मिलेर बस्न चाहनुहुन्छ।
हेर्नका लागि पहिलो कुरा तपाईको वेब तत्वहरूको स्थिरता हो। तपाईको हेडरहरू, साइडबारहरू, नेभिगेसन बारहरू, र फुटरहरू जस्ता चीजहरू सबै एकै ठाउँमा रहनुपर्दछ। यस तरीकाले, व्यक्तिसँग साइटमा हिंड्दा मानिसहरूसँग तिनीहरूको चरणमा हिचक हुँदैन।
अर्को, हेडिंग, फन्ट, छवि, र रंग जस्ता चीजहरूमा विचार गर्नुहोस्। कुनै पनि वेबसाइटमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु तथ्य तथ्य प्रकट गर्दछ कि त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ फन्ट र रंग थोरै परिवर्तन भएका छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि अर्को पृष्ठमा हेडरको फन्ट अर्को हो।
समान स्पटहरूमा रंगहरूको लागि, साथै रंगहरू र लोगोहरूमा।
Design. डिजाईन गर्नुहोस् तपाईको ग्राहक कसरी महसुस गर्न चाहन्छ
व्यक्ति, प्राय: जसो सामानहरू खरीद गरिरहेका हुँदैनन् किनकी यो तकनीकबाट बिभिन्न उत्पादनहरू भन्दा राम्रो हुन्छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको उत्पादन उत्तम छ, तर सामान्यतया यो केवल रोजाईको भ्रम हो।
यो सामान्यतया तरीका हो जुन उत्पादन प्याकेज गरिएको छ, डिजाइन गरिएको छ, र मार्केटिंग गरिएको छ जसले विशिष्ट दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। अनौठो कुरा यो हो, व्यक्तिले फरक महसुस गर्दछन् जब ती उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन् जुन वास्तवमै बिलकुल फरक हुँदैनन्। यदि तपाईं एक सफल साइट चाहानुहुन्छ भने, यो आवश्यक पर्दछ कि तपाईंसँग तपाईंको लक्षित दर्शकहरू र उनीहरूलाई के मनपर्दछ भन्ने बारेमा राम्रो समझ हुनु पर्छ।
तपाईंले साइट अवधारणा बनाउनु अघि यसलाई थोरै लेगवर्क आवश्यक पर्दछ। थोरै अनुसन्धान गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईंको डेमोग्राफिकमा मानिसहरूले के साइटहरू प्रयोग गरिरहेका छन् र बारम्बार रमाइलो गर्दछन्। यो एक ईमेल सर्वेक्षण, सामाजिक मिडिया प्रश्नावली, वा अन्य माध्यम द्वारा गर्न सकिन्छ।
एकचोटि तपाईंले ती साइटहरू फेला पार्नुभयो जुन तपाईंको ग्राहकहरूले प्रयोग गरिरहेछन्, तिनीहरू बीच स्थिरता खोज्नुहोस् र डिसेफर गर्नुहोस् कि ती साइटहरूको बारेमा के छ जुन मानिसहरूलाई मनपर्दछ। हुनसक्छ तपाईंको ग्राहकहरू साहसी, बुद्धिमान, आन्दोलनको अंश, वा अरू केहि महसुस गर्न चाहन्छन्।
हुनसक्छ वेबसाइटहरूमा एक विशिष्ट फन्ट प्रयोग गरिएको छ जुन केहि कारणले तपाईंको डेमोग्राफिकले माया गर्दछ। तपाईं बेच्दै हुनुहुन्छ तिम्रो ब्रान्ड जब तपाइँ साइट डिजाइन गर्नुहुन्छ, र यो आवश्यक छ कि तपाइँको ब्रान्ड तपाइँको प्रयोगकर्ताहरू द्वारा चाहानुहुन्छ।
The. फ्याट काट्नुहोस्
यदि तपाईं यसमा आईफोन, वा कुनै आधुनिक फोनमा हेर्नुहोस्, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो चिक्कार छ, सानो भएमा यसमा कुनै धक्के वा लहर। अहिलेको डिजाइनमा यो प्रवृत्ति हो।
सरलता कुञ्जी हो, र तपाईं प्रत्यक्ष गर्न सक्नुहुन्छ, उत्तम। तपाईं एकै समयमा सिर्जनात्मक र सरल हुन सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो डिजाइनको साथ रमाईलो गर्न सक्नुहुन्न। कुञ्जी अतिरिक्त सुविधाहरू भन्दा संरचनामा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।
तपाईंको साइट कसरी व्यवस्थित गरिएको छ? यो सजिलो हुन सक्छ? यसलाई यस्तै बनाउने कोसिस गर्नुहोस्।
It. यसलाई स्पष्ट पार्नुहोस् तपाईंको उत्पादन के हो
तपाईंको साइट सीधा बिन्दुमा पुग्नु पर्छ। प्राय: जसो मानिसहरूले उनीहरूको कामलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेरेर वेबसाइट बनाउँदछन्। तपाईंले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा अत्यन्तै चिन्ता केन्द्रित गर्नाले तपाईंलाई सोध्नबाट रोक्न सक्दछ, "के यो प्रयोगकर्तालाई बुझ्ने हो?"
तपाईंको साइटबाट प्रयोगकर्ताले जम्मा गर्ने पहिलो चीज तपाईंको नाम, तपाईंको सेवा, र किन तपाईंको मतलब छ। यो सबै मिशन स्टेटमेन्टमा संक्षेप गर्न सकिन्छ, तर तपाइँ केवल यसलाई पढ्ने मानिसहरूलाई बैंक गर्न सक्नुहुन्न।
र color्ग र फन्ट जस्ता चीजहरूले पनि तपाईंको सेवा बुझ्ने प्रयोगकर्तामा भूमिका खेल्छन्। कार कार वेबसाइट जुन गुलाबी रंग र फ्रिली फन्टहरूले भरिएको थियो व्यंग्य वा व्यंग्यको रूपमा बन्द हुनेछ। यदि होईन भने, यो अव्यावसायिक लाग्न सक्छ।
त्यो रंग र pink्गमा डिग होइन, यो केवल उदाहरण हो यो देखाउन कि तपाईसँग रंग र फन्टसँग सम्बन्ध छ जुन परिवर्तन गर्न सजिलो छैन।
Color. बुद्धिमतापूर्वक र Use्ग प्रयोग गर्नुहोस्
रंगले हाम्रो भावनाहरूमा र हामी कसरी चीजहरू महसुस गर्छौंमा त्यसले वास्तविक प्रभाव पार्छ। रंग मनोविज्ञान र यसले कसरी काम गर्दछ बिभिन्न प्रभावहरू पहिचान गर्न धेरै अनुसन्धान गरिएको छ।
र advantage्ग स्किम छनौट गरेर तपाईंको फाइदाको लागि रंग प्रयोग गर्नुहोस् जुन सही टोन दिन्छ। यदि तपाईं र color ठीक गर्न चाहनुहुन्छ भने, थोरै अनुसन्धान गर्नुहोस् र color्ग थियरीको बारेमा बिट र कसरी विभिन्न चीजहरू लागू गर्न विभिन्न चीजहरू प्रदान गर्न।
त्यहाँ त्यस्तो धेरै छ जुन औसत व्यक्तिले सोच्दैन, र तपाईं त्यो नयाँ जानकारी आफ्नो डिजाइन ठीक-ट्यून गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
F. फन्टका साथ सावधान रहनुहोस्
र colorको समान तरीकामा, फन्टमा भिन्नताहरूले स्पष्ट रूपमा फरक प्रभावहरू दिन्छ।
बाकरभिले पुरानो अनुहार फन्टको रूपमा देखिन्छ जुन कम्पनीको विश्वसनीयतालाई अभिव्यक्त गर्दछ। सेन्स सेरिफ फन्ट जस्तो कि हेल्भेटिका, क्यालिब्री, वा एरियल सफाको रूपमा देखिन्छ। बिकम स्क्रिप्ट वा एडवर्डियन लिपि जस्तो स्क्रिप्ट फन्टले एक सुरुचिपूर्ण वा मायालु टोन दिन्छ।
मस्तिष्कलाई तपाईं कसरी आफ्नो साइट देखा पर्न चाहनुहुन्छ र एक फन्ट छनौट गर्न केहि समय लिनुहोस् त्यो प्रतिबिम्बित गर्दछ.
Your. तपाईको डिजाइनका साथ इमानदार हुनुहोस्
चिप्सको विशाल बैगको बारेमा सोच्नुहोस् जुन, जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ, केवल करिब तीन-अर्धशतक भरिन्छ। ठुलो खेल कुरा गर्न सजिलो छ, विशेष गरी जब तपाईं अनलाइन काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको छवि निर्माण धेरै केसहरूमा आवश्यक छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो उत्पादन वा सेवाहरूको बारेमा बेइमान हुनु पर्छ।
Sure। निश्चित गर्नुहोस् कि सबै काम गर्दछ
यो भन्दै बिना गयो, तर यो भुल्न सजीलो छ। तपाइँको साइटको प्रत्येक र प्रत्येक तत्वको माध्यमबाट जानुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाइँले चाहानुहुन्छ त्यसरी नै कार्य गर्दछ।
यसको मतलब सबै लि links्कहरूमा क्लिक गर्नु, सबै स्क्रोल बारहरूको प्रयोग गरेर, लि links्कहरू आफूले लिनुपर्ने ठाउँमा जानुपर्‍यो र ती मध्ये कुनै पनि मर्दैनन् भन्ने कुरा निश्चित गर्दै, र तपाईंको भुक्तानी प्रशोधन प्रणालीको परीक्षण गर्दैछ कि यो राम्रो स्थितिमा छ भनेर पुष्टि गर्न।
१०. परिवर्तनहरू जारी राख्नुहोस्
के तपाईं कहिल्यै वेबसाईटमा आउनुभएको छ जुन स्पष्ट रूपमा एक दशक पहिले बनाइएको थियो? क्राइगलिस्ट बाहेक, यो शंकास्पद छ कि धेरै साइटहरूले पुरानो साइट डिजाइनको साथ भाग्य छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो साइटको अनुभव अपडेट गर्नुभयो कुनै पनि समयमा सोच्नुहोस् कि यो अलि अलि धेरै सकियो। तपाईं पुरानो साइटहरूको चिहानमा अन्त गर्न चाहनुहुन्न जुन व्यक्तिहरू प्रयोग गर्न चाहँदैनन्।
११. सम्भव भएसम्म अन्तर्क्रियात्मक हुनुहोस्
तपाईंको साइटले तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन अनुमति दिनुपर्दछ यदि उनीहरूलाई चाहिएमा। तपाईंको प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता तपाईंको कर्मचारी र बजेटमा निर्भर गर्दछ, तर त्यसले तपाईंको ग्राहकहरूको सम्पर्कमा रहनको लागि परिवर्तन गर्दैन।
धेरै साइटहरूमा च्याट उपलब्धता हुन्छ, र त्यो प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। तपाईंसँग छलफल गर्न फोरमहरू छन्, व्यक्ति तपाईंलाई सम्पर्क गर्नको लागि च्याट, वा साधारण सम्पर्क पृष्ठ, तपाईंको ग्राहकहरूको लागि अपरिचित नहुनुहोस्।
राम्रो डिजाइन चाहिएको छ?
यदि तपाईं आफ्नो बजारलाई कुनै पनि प्रकारको उत्पादन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई व्यक्तिहरू भेट्टाउन चाहानुहुन्छ जसले तपाईंलाई विभिन्न उत्पादनहरूको लागि राम्रो डिजाइन दिन सक्दछन्।
तपाईंलाई व्यावासायिक कार्डहरू, टी-शर्टहरू, र अधिक पनि चाहिन सक्छ। यदि तपाईं एक खोज्दै हुनुहुन्छ मानिसहरुको समूह तपाइँलाई तपाइँको उत्पादनहरू डिजाईन गर्न र प्रिन्ट गर्न मद्दतको लागि, हामीसँग तपाईंलाई चाहिएको सबै छ।
Business कसरी तपाइँको व्यवसाय कार्ड को लागी सर्वश्रेष्ठ फन्ट छनौट गर्न
१→ सर्वश्रेष्ठ व्यापार कार्ड टेम्पलेट २०१lates →